Ross Video မှရရှိသောနံပါတ်တစ်ဆယ့်ခြောက် - ပုံဗီဒီယို | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Ross ဗွီဒီယိုသည် Acquisition နံပါတ်ခြောက်ဆယ့်ခြောက်ပုံရှိသည်
Ross ကဗီဒီယို တိုရွန်တိုအခြေစိုက် Image Video ၏ဝယ်ယူမှုကိုကြေငြာရန် ၀ မ်းသာသည်။ Image Video ကို Ross ကဲ့သို့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သော 1974 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏အဓိကအားဖြင့်အသံလွှင့်ကွန်ယက်ပံ့ပိုးသူများ၊ အားကစားရုံများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းဗီဒီယိုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့်ဝတ်ပြုရာနေရာများတွင်အသုံးပြုသော TSI ၏ထိန်းချုပ်မှုပလက်ဖောင်းအတွက်လူသိများသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံတွင်ရောင်းအားများ၊ အထင်ကြီးလောက်သောဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ရာပေါင်းများစွာသောထောက်ခံထားသောကိရိယာပရိုတိုကောများ (အစဉ်လိုက်အမှတ်စဉ်ချိတ်ဆက်မှုများမှနောက်ဆုံးပေါ် ST2110 လုပ်ငန်းအသွားအလာများအထိ) သည် TSI ပလက်ဖောင်းသည် Tally နှင့် UMD ထုတ်ကုန်အတန်းများတွင် ဦး ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒီဝယ်ယူမှု - Ross ကဗီဒီယို၂၀၀၉ ခုနှစ်မှခြောက်ဆယ့်ခြောက်နှစ် - Zach Wilkie နှင့် David Russell တို့ ဦး ဆောင်သော Image Video ၏ထုတ်ကုန်အသင်းနှင့်သူတို့၏ R&D နှင့်နည်းပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့များသည် Ross သို့ကူးပြောင်းကြလိမ့်မည်။ ယခုထုတ်ကုန်မန်နေဂျာဖြစ်သူ Ross Tally Systems သည်ဇာချ်ဝီလီသည်ဘဝ၏အလားအလာကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိသည် Ross ကဗီဒီယို။ “ အဲဒီနှစ်မှာပဲတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကနေဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာပါ Ross ကဗီဒီယို အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း Ross စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးချဲ့မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ မိသားစု ၀ င်ဖြစ်ရတာကိုကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒီဝယ်ယူမှုကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အသစ်တွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်တိုးချဲ့နိုင်အောင်ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ ”
စီအီးအိုဒေးဗစ်ရော့စ်သည်ဝယ်ယူမှု၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ “ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာကျွန်တော့်အဖေကခြေထောက်ကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဆေးရုံတက်ခဲ့တယ်။ Leitch Video ကိုစတင်တည်ထောင်သူ Jim Leitch ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ) သူ့ဆီလာပြီးငါ့အဖေကိုအကြံပေးတယ်။ သူကကနေဒါမှာ Leitch Video နဲ့ Image Video ရှိတာကိုတွေ့ရမယ် Ross ကဗီဒီယို။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Image Video မရှိရင်တော့ကျွန်တော့်အဖေကလမ်းပြဖို့အဲဒီလိုစံပြပုဂ္ဂိုလ်မရှိခဲ့ဘူး။ အဖေကငါတို့ကုမ္ပဏီကိုစတည်ထောင်ခဲ့ရင်တောင်ငါတို့ကိုနာမည်မပေးချင်ဘူး Ross ကဗီဒီယို ဒီနေ့ ဤနှစ်များကုန်လွန်ပြီးနောက် Image သည် Ross ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အဖေသဘောတူလိုက်သည့်အရာမှာအတော်လေးထူးခြားသည်။ Image ၏ TSI Tally ပလက်ဖောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအဖြေအမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ကောင်းသောဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်ပြီး Ross ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်တွင်ပိုမိုရွေးချယ်မှုပေးနိုင်သည်။
Ross Tally Systems အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Ross ကဗီဒီယို - မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု, မြင့်မားသောအကျိုးရှိစွာထုတ်လုပ်မှု Solutions
Ross အင်အားကြီးသည်နေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူဘီလီယံနှင့်ချီသောဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏အကျယ်ပြန့်ဆုံးအတိုင်းအတာဖြင့်နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်သည် မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု, မြင့်မားသောထိရောက်မှု ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ရော့စ်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသတင်း၊ ရာသီဥတုနှင့်အားကစားတို့ကိုပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည် ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာအတွက်ပါ ၀ င်သည် အားကစားကွင်းမျက်နှာပြင်များဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များနှင့်ရော့ခ်ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ, ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များ, ကော်ပိုရိတ်တင်ပြချက်များ နှင့်အကြောင်းအရာဖှယျ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်အိမ်များ.
Ross ကဖြေရှင်းချက်ဟာပရိသတ်တွေနှင့်စျေးကွက်မိတ်ဖက်များ၏အထင်ကြီးကြပါပြီ Eurosport, BBC World, SKY, Google YouTube Space London နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ကုန်အင်အားကြီး ESL။ ရော့စ်သည်ကင်မရာများ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီရွေ့လျားနေသည့်ဂရပ်ဖစ်များ၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခလုတ်များ၊ စက်ရုပ်ကင်မရာစနစ်များ၊ တိုးချဲ့ထားသောလက်တွေ့ / virtual စတူဒီယိုများ၊ ဗွီဒီယိုဆာဗာများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် routers များ၊ တိုက်ရိုက်အဖြစ်အပျက်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှု.
ယခင်: Velocix သည် Cloud-Native Video Advertising နှင့် Stream Personalization ဝန်ဆောင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: Pace Pictures သည် Blackmagic Design ဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Post ကြားရှိမျဉ်းကြောင်းများကိုမှုန်ဝါးစေသည်